စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်း | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-cropprotectionmachinery.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
မီးခိုး-ရေအမျိုးအနွယ်၏အပင်ပေါက်ရန်အတွက်လှုံ့ဆော်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ထုတ်ယူအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်,တိုးတက်မှုနှုန်း seedling နှင့်စိုက်ပျိုးမှုအောက်မှာအများကြီးစက်ရုံမျိုးစိတ်ပြန့်ပွားရောဂါတားစီး.မီးခိုး-ရေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့သည်.ဒါဟာဖြေရှင်းချက်အက်ဆစ်ခဲ့သည်,စက်ရုံအာဟာရသိသိသာသာပမာဏ,NH4 ၏အဆင့်မြင့်+စက်ရုံတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောနိုက်ထရိုဂျင်သတင်းရင်းမြစ်နှင့်အထူးသဖြင့်ဖင်နိုလစ်ကွန်ပေါင်းများ antifungal လှုပ်ရှားမှုမြင့်မားသောအကြောင်းအရာများကိုရှိပါတယ်ရာ.မီးခိုးအဆိုပါဒြပ်ပေါင်း-ရေဓာတ်ငွေ့ Chromatography နေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြ-အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometry(GC-ဒေါ်),30 ဒြပ်ပေါင်းများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ,အဓိကအားဖြင့်အယ်လ်ကိုဟောခဲ့ကြရသော,lactones,aldehydes,အက်ဆစ်,ketones,alkaloid နှင့် hydroxybenzenes.အဆိုပါဖော်ထုတ်ဒြပ်ပေါင်းများတွေထဲမှာ,ဒီလေ့လာမှုမှာအရာစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဒြပ်ပေါင်းများ3အမျိုးအစားများရှိ,သူတို့ဖြစ်ကြသည် 2(5H)-သင်္ဘောသီးကိုအစေ့များအပင်ပေါက်ရန်အတွက်လှုံ့ဆော်စေခြင်းငှါ Furanone,အတော်ကြာမှိုနှင့် 1 နာရီ၏တိုးတက်မှု inhibited စေခြင်းငှါဖင်နိုလစ်ကွန်ပေါင်းများ-Imidazole,1-methyl-4-nitroso-5-phenyl-ကြောင်းတားစီးဖို့စွမ်းရည်နှင့် antifungal ရောဂါပိုး.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cropprotectionmachinery.com/my/agriculture-device.html
စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူနှင့် စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်း ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 35,686 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ cropprotectionmachinery.com